Fanatanjahantena · Janoary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fanatanjahantena · Janoary, 2012
Tantara mikasika ny Fanatanjahantena tamin'ny Janoary, 2012
Afrika Mainty29 Janoary 2012
Any Afrika ary hatrany an-toeran-kafa mihitsy, angonin'ny baolina kitra hanodidina ny ekipam-pirenena iray ny olona. Ao anatin'ny fientanentana manodidina ny CAN2012, misy teboka roa mahasarika ny sain'ireo bilaogera. Ny voalohany, dia ny tsy fisian'ireo firenena vaventy mahazatra amin'ny resaka baolina kitra afrikana..
Afrika : CAN 2012, Fihodinana Voalohany Feno Zava-tsy Nampoizina
Nitahiry zava-tsy nampoizina maro ho an'ireo firenena sangany toa an'i Sénégal sy Maraoka ny fihodinana voalohan'ny CAN 2012, efa nihintsana sahady. Ireo mpiondana aterineto aty Afrika dia naneho hevitra momba ireny vokatra ireny izay nahaliana ny rehetra nanerana ny kaontinanta.
Global Voices Podcast: Taom-baovao 2012 Feno Fahavitrihana
Afrika Mainty04 Janoary 2012
Anatin'ity andian'ny podcast ity dia hamerina hibanjina ny taona 2011 isika, handinika ireo fitoviana sy fahasamihafàna eo amin'ny fanaovan-gazety mahazatra sy ny fampiasàna ny media vaovao, hamantatra momba ny fihaonan'ny Rising Voices mitondra aingam-panahy natao tany Bolivia mba hanohanana ny fivoaran'ny tontolon'ny bilaogin'ireo teratany sy tsy mitovy ara-piaraha-monina. Nanao dia...